မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများ အမြန်ဆုံး ပြန်လည်စတင်ကျင်းပ နိုင်ရေးအတွက် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု များကို MOHS မှ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ လာရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေး
မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်၊ မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ကော်မတီမှ ကြီးမှူးကျင်းပလျက်ရှိသည့် MPT မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် အမှတ်ပေး ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများနှင့် ရှုံးထွက်ပွဲစဉ်များ အမြန်ဆုံး ပြန်လည် ကျင်းပနိုင်ရေ...
MPT Myanmar national League 2020 လက်ကျန်ပွဲစဉ်များအတွက် ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်နေသည့် ရှမ်းယူနိုက်တက်အသင်းသည် နောက်ခံလူ သက်ပိုင်ထွေးအား ခေါ်ယူသွားရန် ပြင်ဆင်လျက်ရှိပြီး ခြေစွမ်းစမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်လျ...
MNL ပြိုင်ပွဲများ ပြန်လည် ကျင်းပခွင့်ရရှိရေးနှင့် နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲများအတွက် လက်ရွေးစင်အသင်းများ စခန်းဝင်လေ့ကျင့်နိုင်ရေး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအား MFF GS နှင့် MNL CEO တို့ သွားရောက်တွေ့ဆုံ
"ကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ဇူလိုင်လ တတိယပတ်အကုန်(သို့) နောက်ဆုံးပတ်အတွင်း ပြန်လည်ကျင်းပရန် မူအားဖြင့်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့"ကိုဗစ်၁၉ ကူးစက်ရောဂါကြောင့် ရပ်နားထားရသည့် ၂၀၂...
Chinland FC မှ ???????? ??? ??????? ပထမအကွိမျ လှူဒါနျး ခွငျး
ကိုဗဈ-၁၉ ကူးစကျရောဂါကာလအလှနျတှငျ ကငြျးပသှားရနျ စီစဉျထားသည့ျ မွနျမာနရှေငျနယျလိဂျပှဲစဉျမြားအတှကျ MNL တာဝနျရှိသူမြားနှင့ျ MPT မှ တာဝနျရှိသူတို့တှေ့ဆုံ
ကိုဗဈ၁၉ ကူးစကျရောဂါကာလအလှနျတှငျ ကငြျးပသှားရနျ ပွငျဆငျထားသည့ျ ၂၀၂၀ မွနျမာနရှေငျနယျလိဂျအမှတျပေးဘောလုံးပွိုငျပှဲမြား ကငြျးပပွုလုပျသှားနိုငျရေးအတှကျ မွနျမာနရှေငျနယျလိဂျနှင့ျ မွနျမာနရှေငျနယျလိဂျမိတျဖက...
ရာသီတုတျကှေးရောဂါ ကာကှယျဆေးထိုးနှံခွငျးမြား ရနျကုနျယူနိုကျတကျအသငျးပွုလုပျ
တဈဦးတဈယောကျခွငျးစီ၏ ကနြျးမာရေးကို အထူးဂရုပွုအလေးထားသည့ျ ရနျကုနျယူနိုကျတကျအသငျးသညျ မိုးရာသီတှငျဖွဈလေ့ရှိသည့ျ ရာသီတုတျကှေးရောဂါကို ကာကှယျသည့ျ အနဖွေင့ျ ကွိုတငျကာကှယျဆေးထိုးနှံခွငျးမြားကို ယနေ့နေ့လ...
ဆန်းဒေးမက်သရူး နေရာတွင် အခြားပြည်ပတိုက်စစ်မှူး တစ်ဦး ခေါ်ယူသွားမည်ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်း ကစားသမားအချို့ကိုလည်း ချိတ်ဆက်နေသည့် ရခိုင်ယူနိုက်တက်
MPT Myanmar National League 2020 ဒုတိယအကျော့ပွဲစဉ်များအတွက် ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ ကစားသမားအချို့ကို ခေါ်ယူအားဖြည့်သွားရန် ပြင်ဆင်ထားသည်ဟု ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းနည်းပြချုပ် ဦးသန်းဝေက ပြောကြားသွားခဲ့သည်။...
~ မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်ကော်မတီ အစည်းအဝေး ယနေ့တွင်ကျင်းပခဲ့~ သက်ဆိုင်ရာမှ ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီး ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်စတင်ရန် စီစဉ်ထား
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည့် ကိုဗစ်၁၉ ကူးစက်ရောဂါကြောင့် ရပ်နားထားခဲ့ရသည့် မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်အမှတ်ပေးပြိုင်ပွဲများ ပြန်လည်ကျင်းပသွားရန်နှင့် ရှေ့ဆက်သွားမည့် အစီစဉ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးအတ...
၁၉၄၉ ခုနှစ်ကုန်ခါနီးမှာ ဥရောပဘောလုံးကလပ် အသင်းတစ်သင်း ရန်ကုန်ကိုလာရောက် ကစားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဆွီဒင်ကလပ် ဟဲလ်ဆင်ဘော့ဂ် အသင်းပါ။ ဟဲလ်ဆင်ဘော့ဂ်ဟာ မြန်မာပြည်ကို ပထမဆုံးလာရောက်ကစားတဲ့ ဥရောပကလပ်တော့မဟုတ်ဘဲ ၁...
မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌနှင့် မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ကော်မတီ ဥက္ကဌ ဦးဇော်ဇော်၏ ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းမှ ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့သည့် မွန်မြတ်သော လှူဒါန်းပံ့ပိုးမှု တစ်ရပ်
မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌနှင့် မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ကော်မတီ ဥက္ကဌ ဦးဇော်ဇော်၏ ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းမှ ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့သည့် မွန်မြတ်သော လှူဒါန်းပံ့ပိုးမှု တစ်ရပ်...
ရှုံးထွက်ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ချန်ပီယံဆုဖလား သုံးကြိမ်ရရှိထားဖူးတဲ့ ဧရာဝတီယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ပုံရိပ်များ ပြန်လည်တင်ဆက် ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဧရာဝတီယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ၂၀၁၂၊ ၂၀၁၄ ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွေ မှာ သုံးကြိမ်ဆုဖလား ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။...
ဒီဂိုးသမားက ဒီဂျင်နယ် ဖြစ်ပြီး ဟံသာဝတီယူနိုက်တက်အသင်း ဂိုးသမားဖြစ်ပါတယ်။
&nbsp;ဒီဂျင်နယ်ဟာ ၂၀၁၀ ရှုံးထွက်ဖလား ။ ဟံသာဝတီယူနိုက်တက်(ဥဿာယူနိုက်တက်)အသင်းရရှိအောင် တစ်ထောင့်တစ်နေရာက စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ဒီဂျင်နယ်ဟာ ချန်ပီယံဆုဖလားကို အသင်းနဲ့အတူ ရရှိခဲ့တ...
မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်နှင့် F&N Company (Myanmar) တို့မှ Testy Lemon ရေဓါတ်ဖြည့် အချိုရည်ကတ် ၁၅၀ (ဗူးပေါင်း ၃၆၀၀)ကို ယနေ့ နံနက်ပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့၊ သုဝဏ္ဏကွင်း၌ ပေးအပ်လှူဒါန်း ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်နှင့် F&amp;N Company (Myanmar) တို့မှ ဖောင်ကြီး Quarantine Center နှင့် "We Love Yangon" အဖွဲ့တို့ အတွက် 100 Plus Active (Non Carbonated) Testy Lemon ရေဓါတ်ဖြည့် အချိုရည်ကတ် ၁၅၀...
မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်(၂) ပြိုင်ပွဲဝင် ယောမြေအက်ဖ်စီ အသင်းက နှာခေါင်းစည်း Mask များနှင့် လက်သန့်ဆေးရည်များကို လှုဒါန်းမှုပြုလုပ်ခဲ့
မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်(၂) ပြိုင်ပွဲဝင် ယောမြေအက်ဖ်စီ အသင်းသည် အသင်းပိုင်ရှင် ဦးစိန်ထွေး၏လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ကစားသမားများ နေထိုင်ရာ မင်္ဂလာဒုံ မြို့နယ် နွယ်ခွေစံပြကျေးရွာတွင် Covid19 ကာလအတွင်း ရောဂ ါထိန်းခ...
မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ဧရာဝတီ ဖောင်ဒေးရှင်းတို့ သည် COVID19 ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာန၏ တာဝန်ပေးမှု လမ်းညွှန်မှုများအတိုင်း ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် (MFF) နှင့် AYA Bank တို့၏ အဆောက်အဦများ ဖြစ်ကြသည့် တာမွေမြို့နယ်ရှိ AYA Bank သင်တန်းကျောင်း၊ ဝေဇယန္တာလမ်းမကြီးပေါ်ရှိ အမျိုးသား ဘောလုံးအကယ်ဒမီ (ရန်ကုန်) နှင့် မြန်မာ့လ...
၂၀၁၀ ရှုံးထွက်ဖလားကို ဟံသာဝတီယူနိုက်တက်(ယခင် ဥဿာယူနိုက်တက်)အသင်း ရရှိအောင် တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်မှူး လစ်ပီလစ်ပီ ဖြစ်ပါတယ်။လစ်ပီလစ်ပီဟာ ၂၀၁၀ အမှတ်ပေးပြိုင်ပွဲမှ...
အသက် ၆၀ နှစ်အထက် မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ကစားသမားဟောင်းများနှင့် ဒိုင်လူကြီးဟောင်းများ နေထိုင် စားသောက်မှု အဆင်ပြေစေရေး အတွက် တစ်ဦးလျင် 5KG ဆန်နှစ်အိတ်စီနှင့် ငွေကျပ် တစ်သိန်းစီအား ဧရာဝတီ ဖောင်ဒေးရှင်းက ေ...
မောဝ်ရဝတီ ဘောလုံးအသင်း ကုမ္ပဏီ မိသားစု ၏ covid 19 ကာလအတွင်း ကုသိုလ်ပြုခဲ့သော အလှူမှတ်တမ်း များ
ဓမ္မဂုဏ်ရည် ကျောင်း ( ရွှေပြည်သာ )သစ်တံခါး ကျောင်း ( လှိုင်သာယာ )အောင်သာကုန်း ကျောင်း ( တိုက်ကြီး )ဆရာလေး ကျောင်း ( ပဲခူး )လိုတရ ဟင်္သာတ ကျောင်း ( ရွှေပြည်သာ )နတ်စ...
ချင်းလန်း အသင်း၏ လှူဒါန်းမှု
ချင်းလဲန်းအက်ဖ်စီ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဦးနိုင်းဟုန်နှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် CHINLAND FOR TEDIM အစီအစဉ်ဖြင့် ယနေ့ ဧပြီလ(၂၇)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ချင်းပြည်နယ် တီးတိန်မြို့ရှိ မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာ...
မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် တာဝန်ရှိသူများနှင့် MPT မှ တာဝန်ရှိသူများ တွေ့ဆုံကာ အနာဂါတ် လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆွေးနွေး
ယမန်နေ့ ဧပြီ ၂၄ ရက် နံနက်ပိုင်းက မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်၏ အဓိက မိတ်ဖက် MPT မှ တာဝန်ရှိသူများသည် Video Conferencing ပြုလုပ် တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး အနာဂါတ် လုပ်ငန်းစဉ်...
မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ကလပ် ရတနာပုံအသင်း ပိုင်ရှင်နှင့် မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ဒုတိယ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာ စိုင်းဆမ်ထွန်း၏ Alpine ရေသန့် မိသားစုမှ မန္တလေးမြို့အတွက် ရေသန့်ဘူး သုံးသိန်း ထပ်မံလှူဒါန်းခြင်း...
Alpine မိသားစုမွ ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် မန္တလေးမြို့တွင် ရေဘူး ၃ သိန်း ထပ်မံ လှူဒါန်းခြင်း&nbsp;Alpine သောက်ရေသန့်မှ ၁ လီတာ သောက်ရေသန့် ဘူးပေါင်း ၃ သိန်းကို ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင်...
COVID19 ကာကွယ်၊ ကုသ၊ ထိန်းချုပ်နိုင်ရေး ရှေ့တန်းမှ ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ တာဝန်ထမ်းဆောင် လျက်ရှိသော ဝေဘာဂီ အထူးကု ဆေးရုံကြီးမှ ဆရာဝန်များ၊ သူနာပြုများ၊ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများကို ဂုဏ်ယူလေးစား ကျေးဇူးတင်စ...
အသင်း၏ ဂန္ထဝင်ခံစစ်မှူးကို ပြန်လည်ခေါ်ယူရန် ပြင်ဆင်နေသည့် ရှမ်းယူနိုက်တက်
ခံစစ်ပိုင်း ယိုယွင်းနေမှုကို ပြင်ဆင်သည့်အနေဖြင့် ရှမ်းယူနိုက်တက်အသင်းသည် အသင်း၏ ဂန္ထဝင်နောက်ခံလူဟာင်း ဝင်းမင်းထွဋ်ကို ပြန်လည်ခေါ်ယူရန်ပြင်ဆင်နေသည်ဟုဆိုသည်။ရှမ်းယူနိုက်တက်အသင်းသည် MPT Myanma...